Ivhu idzva rekubata zvakakosha: kushomeka kwevashandi, kuvandudzwa, kuchengetedzwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Ivhu idzva rekubata zvakakosha: kushomeka kwevashandi, kuvandudzwa, kuchengetedzwa
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Czechia Breaking News • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Ivhu idzva rekubata zvakakosha: kushomeka kwevashandi, kuvandudzwa, kuchengetedzwa.
Pachave nezvinonetsa sezvo mashandiro epasi achikwira kuti asangane nekukura kuri kuda sezvo indasitiri yezvendege inopora kubva kuCOVID-19 inofambira mberi.
Vazhinji vane hunyanzvi hwekubata pasi vashandi vakasiya indasitiri uye havasi kudzoka.
Zvishandiso zviviri zvakakosha zvevanobata pasi iIATA Ground Operations Manual (IGOM) uye IATA Safety Audit yeGround Operations (ISAGO).
Digitalization inogona kutyaira kuvandudzwa kwemaitiro ayo anozove akakosha mukuvandudza zvese kusimba uye kubereka.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) iri kutarisa pazviyero, dhijitari uye kugadzirisa kushomeka kwevashandi vane hunyanzvi kuvaka kusimba uye kuve nechokwadi chekugara kwenguva refu kwedenda rekubata pasi.
"Pachave nematambudziko sezvo mabasa ekubata pasi ari kukwira kuti asangane nekukura kuri kuita sezvo indasitiri yezvendege inopora kubva kuCOVID-19 inofambira mberi. Kukunda kushomeka kwevashandi, kuve nechokwadi chekuchengetedzwa nekutevedzwa kwakasimba kumitemo yepasi rose uye kugadzirwa kwedhijitari uye zvechizvino-zvino zvichange zvakakosha kuti tiwane kutangazve kunotyisa, "akadaro Monika Mejstrikova, Director weIATA weGround Operations, achitaura pamakumi matatu nenhatu. Iată Ground Handling Conference (IGHC), iyo yakavhurwa mukati Prague nhasi.
Ground handling providers vari kutarisana nekushomeka kwakanyanya kwehunyanzvi uye matambudziko mukuchengetedza nekupinza vashandi basa.
“Vashandi vakawanda vane hunyanzvi vakasiya indasitiri iyi uye havasi kudzoka. Uye kunyorera, kudzidzisa uye kubvumidza vashandi vatsva kunogona kutora kusvika kumwedzi mitanhatu. Saka zvakakosha kuti tichengete vashandi varipo uye tiwane nzira dzakasimba dzekukwira vashandi vatsva, ”akadaro Mejstrikova, uyo akataurawo mhinduro dzakati wandei.
Kuti vachengetedze vashandi vane hunyanzvi, hurumende dzinofanirwa kubatanidza vanobata pasi muzvirongwa zvemihoro
Kuti ikurumidze kudzidzisa maitiro, kushandiswa kwehunyanzvi-kwakavakirwa kudzidziswa, ongororo uye online mafomu ekudzidzisa kunofanirwa kuwedzerwa, uye zvinodiwa zvekudzidziswa zvinowiriraniswa.
Kuwedzera kugona kwekushandiswa kwevashandi, pasipoti yekudzidzira inofanirwa kugadzirwa iyo inozoziva hunyanzvi kune vese vanobata pasi, ndege uye / kana nhandare dzendege.